ASWJ oo dhadhaqaaq ciidan ka bilowday koofurta Guriceel | KEYDMEDIA ONLINE
ASWJ oo dhadhaqaaq ciidan ka bilowday koofurta Guriceel
Wasiirkii Amniga Galmudug Axmed Maclin Fiqi ayaa shalay ku dhawaaqay inuu iska casilay xilka kadib markii ay isag aiyo Qoorqoor isku khilaafeen qaabka loo wajahayo arinta Ahlu Sunna, inta badan Wasiirrada ayaa ku aragti ah Fiqi.
GURICEEL, Soomaaliya – Koox diimeedka Ahlu-sunna Waljamaaca, ee Jimcihii hore la wareegtay gacan ku heynta magaalada Guriceel, ayaa billowday howl-gallo ay ku sheegeen in ay ku sugayaan amniga degaannada hoos taga magaalada, kuwaas oo hore ay ugu sugnaayeen Al-Shabaab.
Sawirro lagu baahiyay baraha bulshada, oo u muuqday dhoolla-tus ciidan, ay Kooxdu ku sheegtay in ay Al-Shabaab, ka raacdeeyeen tuulooyinka Af-cagaag, dhagaxya-weyn Dabarre, iyo Jaaw, kuwaas oo hoos yimaada degaanka Gal-qoryaalle, oo ku dhawaad 60km koofur ka xiga Guriceel.
Ciidankaan ayaa wata ku dhawaad 10 gaari oo kuwa dagaalka ah, waxaana la rumeysan yahay in ujeedkoodu yahay, in ay Madaxweynaha Galmudug tusaan Awood ciidan iyo in ay sidii ay hore u sheegeenba dadka degaanka iyo Dowladda ka dhaadhicaan in ay kaliya doonayan la dagaallanka Al-Shabaab.
Kooxdaan, garabka ka heysata maamulka Puntland, ayaa la fahansan yahay, in ay duullaan ku qaadi doonto magaalada Dhuusamareeb, ka hor inta aysan billaaban doorashada Golaha Shacabka, maadaama ujeedkooda ugu weyn uu yahay in ay gor-gortan siyaasadeed ku galaan kuraastaas.
Dhanka kale, bannaanbax lagu taageerayay is-casilaaddii Wasiirkii Amniga Axmed Macalin Fiqi, ayaa maanta ka dhacay Guriceel, sidaas oo kale, saraakiil ka tirsanaa qeybta 21-aad ee Ciidanka Xoogga dalka, ayaa maanta lagu arkay magaalada, tas oo la micno ah in ay dhanka Suufida soo mareen.
Galmudug ayaa wajaheysa xaalad hubanti la’aan siyaasadeed ah, Madaxweyne Qoorqoor, ayana xalay dadaal xooggan ku bixiyay inuu xubno ka mid ah Golaha Wasiirrada ku qanciyo in aysan xilligaan adag is-casil, isla-markaana uu u ballan qaaday inuu ka tala-galin doono go’aannada masiiriga ah.